Nepali Sex Stories: अंगालो मारेर ...........................
बीबीएस गरिराख्दा एउटा कम्प्युटर ट्रेनिङ्गको बेला उनको भेट सागरसंग भएको थियो। सागर त्यसबेला भर्खरै पढाइ सकेर त्यस ट्रेनिङ्ग इन्स्टिच्यूतमा काम गर्न सुरु गरेका थिए। भेटघात बिस्तारै प्रेममा परिवर्त्तन भयो। उनीहरु हरेक दिनजसो नै भेत्थे, अनि सागरसंग मोटरसाइकलमा बसेर बिभिन्न थाउँहरु घुम्न जान्थे, रेस्टुराँमा खान्थे। समय निकै रमाइलो थियो। रेस्टुराँको तेबलमा पहिलो पल्ट काउकुति लाग्ने गरि एकअर्काको हात समातेर मुसारेको थिए उनिहरुले। अनि एकदिन चोभार घुम्न जाँदा जंगलतिर पसेर धेरैबेर मायाप्रितिको कुरा गरे र यस क्रममा उनीहरुको बीच पहिलो पल्ट ओठ ओठको गहिरो चुम्बन भएको थियो। अनि त्यहिं अंगालोमा चुम्बन गर्दा गर्दै सागरले पहिलो पटक पार्वतीको लुगामाथिबाट स्तन छोएको थियो। त्यसपछिका एकान्त भेटघातमा किस गर्नु नियमित जस्तै भएको थियो। एक दिन अंगालो मारेर किस गर्दै हातहरु जीउभरि सलबलाउँदै गर्दा सागरले पार्वतीको हातलाइ पाइण्टमाथिबाट उस्को लिङ्गको स्पर्श गराएको थियो। अनि उसको हात पनि सलवार कुर्ताको माथिबाट उनको योनि र चाकक्षेत्रमा निकै काउकुती लाग्ने गरी सलबलाएको थियो।
अनि हातहरु जीउभरि सलबलाए। "भिजेको लुगा के लाउने" भन्दै सागरले पार्वतीको लुगा फेरि खोलिदियो। अलि डर लागीराखेता पनि पार्वती प्यारमा पुरै गलिसकेकि थिइन र परिस्थितिले उनलाइ निकै कामुक बनाइराखेको थियो। उनी रुमालले जीउ छोपेर बेडतिर गइन र कम्बल भित्र पसिन। "त्यो भिजेको सुरुवालले बेड भिजिहाल्छ नि" सागर जिस्किदै थियो तर सुरुवाल साँचै भिजेको थियो। सागरले नै कम्बल भित्र हात पसाएर सुरुवाल खोल्न कोशिस गय्रो। "नाइ नाइ बिहे नगरी पनि … " पार्वती केहि भन्न खोज्दै थियो। तर सागरको ओठ त्यहि समयमा उसको ओठमा जोडियो र लामो गहिरो किसपछि उनले केहि बोल्न सकिनन्। "भिजेको सुरुवाल नलगाउ पो भनेको त" एकछिन पछि सागर बोल्यो। सागरको हात उनको कम्मरमा पुग्दा उनले अब रोकिनन् बरु इजार खोलेर सहयोग नै गय्रो। उनको सुरुवाल पनि खुल्यो तर उनी कम्बल मुनि थिइन। सागरले पनि आफ्नो पाइण्ट खोलेर मिल्कायो। अण्डरवेयर पनि भिजेकोले त्यो पनि खोलेर फाल्यो र पुरै निर्बस्त्र भयो अनि हाँस्दै कम्बल भित्र पस्न कोशिस गय्रो। पार्वतीले कम्बल त अब निकै कस्सिने गरी बेरेर बसेकी थिइन। उनलाइ भित्र नै राखेर सागरले उनलाइ अंगालो हाल्यो। अनि फेरि चुम्बनको प्रक्रिया शुरु भयो। पार्वतीको हातहरु अब अधैर्यपुर्बक उसको नाङ्गो जीउमा चलिराखेको थियो। अलि स्वर फुटेको समयमा उनले भनिन् "त्यो चाहिँ नगर्ने है डर लाग्छ" अब सागर पनि कम्बल भित्र पुगिसकेको थियो। भिजेको कट्टु र ब्रा त पार्वतीले पहिले नै छोदिसकेको रहेछ, त्यसैले पो उनले कम्बल जोडले बेरेकी रहेछन्। अब कम्बल भित्र पुरै निर्बस्त्र केटा र केटी, दुबै अति कामुक। हातहरु अब जतासुकै चलिराखेको थिए। मुख मुख जोदिएर जिब्रोहरु एकअर्कोको मुख भित्र चलिराखेको थियो। पार्वतीको हात अब सागरको कडा लिङ्ग समातेर चलाइराखेको थियो। सागरको हात उनको योनिमा पुग्दा पार्वतीले त्यो हात च्याप्प समातिन् अनि "प्लीज, डर लाग्छ" भनिन। तर सागर त सबै कुराको लागि पुरै तयार रहेछ। "अब मंसीरमा त हाम्रो बिहे भइहाल्छ" त्यो हात माथिल्याएर दुध चलाउदै सागरले भन्यो, "अनि अनसेफ किसिमले गर्नै पनि त होइन नि"। यति भन्दै उसले भुइँमा भएको उसको पाइण्ट तान्यो र त्यसको खल्तीबाट कण्डोमको पाकेट निकाल्यो। "ल हेर, केटा त खतरा रहेछ, यसैको लागि यहाँ ल्याएको हो कि के हो?" पार्वतीको यो प्रश्नपछि सागर अलि भावुक भयो। अनि एउटा हातमा टाउको अदाएर अर्को हात कम्बल माथिबाट पार्वतीलाइ अँगालो हालेर आँखा आँखामा हेरेर सागर बिस्तारै बोल्न थाल्यो।
"पहिलो कुरा त म तिमीलाइ धेरै माया गर्छु, पार्वती, I love you very much. मलाइ खुशी लाग्छ कि छिटै हामी बिहे पनि गर्दैछौं। अनि बैवाहिक जिन्दगीको हरेक जिम्मेवारी लिन म तयार छु। अहिले नै म मेरो भनेर भन्दा हाम्रो भन्ने कुरामा बढि सोच्छु। अनि फेरि अर्को कुरा –मेरो मान्यता हो कि सेक्स विबाहको अति महत्वपूर्ण पार्ट हो र मलाइ त यो भरपुर चाहिन्छ। तर आजै चाहिन्छ भनेको होइन। हामी यसअघिको भेटमा पनि सेक्सुअल युनियनको नजिक पुगेकोजस्तो लागेकोले कहिं एक छिनको बेहोशीले जिन्दगिभर पछुताउनु नपरोस र आबश्यकै परे सुरक्षित तरिकाले मज्जा गर्न सकियोस् भनेर यो कण्डोम खल्तीमा तयारी राखेको हो। कुरा यहि हो अब तिमी कुन किसिमले बुझ्छौ?" "कस्तो अनुभवी जस्तो कुरा गर्दा रहेछौ, धेरै अनुभव छ कि यो कुरामा?" "म तिमीसंग केहि पनि कुरा लुकाउन चाहन्न। हो म रस्सिया पढ्दा मेरा केटी साथीहरु थिए र मेरो उनीहरुसंग यौनसम्बन्ध पनि थियो। तर अब यहाँ आएर तिमीसंग भेतेपछि तिमीबाहेक अरु कुनैसंग कुनै सम्पर्क भएको छैन् र म प्रतिज्ञा गर्छु कि तिमीबाहेक अरु कुनै केटीलाइ फुटेको आँखाले पनि हेर्ने छैन्।" यति भनेर सागरले पार्वतीको निधार, गाला र ओठमा म्वाइ खायो। यतिन्जेल सम्मको कुराले त पार्वतीको हात पनि अब सागरलाइ अंगालो हाल्न पुगिसकेको थियो।
"हामी आज प्रतिज्ञा गरौं कि हामी एकअर्काको लागि। मेरो तन, मन धन सबै तिम्रो लागि। अनि हाम्रो बीच कुनै कुरा नलुकोस। मैले मेरो पुरानो सम्बन्धको बारे बताएं, अब तिमीलाइ पनि केहि भन्नुछ भने …"
पार्वतीले कस्सिएर अंगालो मारेर "I love you सागर I love you" भन्न थालिन्। "मेरो कुनै अनुभव छैन् त्यसैले डर लाग्छ। मेरो लागि त सबै कुरा भनेको तिमी नै हो। तिमीलाइ पाउन म त पुरा रुपले तिमीमै समर्पित छु।
तर दुइ तीन पल्ट पछि त्यो खेलौनाको उपयोग कमै मात्र हुन थाल्यो
Posted by sexjob at 10:10 AM